Filtrer les éléments par date : mardi, 05 mai 2020
mardi, 05 mai 2020 21:42
Rivo Rakotovao: Miantso ny fanjakana mba hijery ny hanampiana ny tantsaha sy ireo indostria eto an-toerana
Nisokatra androany 05 mey 2020 ny fotoam-pivoriana ara-potoana voalohan’ny Antenimiera roa tonta. Nandritra ny kabary fanokafana dia nanambara ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo Rakotovao fa mandalo fotoan-tsarotra ny Firenentsika amin’izao fotoana izao, ka mila firaisankina sy ny fandraisan’andraikitry ny tsirairay. Nohamafisiny ihany koa fa tokony hitandrina ny Malagasy rehetra eo amin’ny fahasalamana satria tsy misy mahalala ny ampitso.
Nanainga ireo vondrona mpandraharaha moa ny tenany mba hiroso amin’ny ady hevitra sy fifanakalozan-kevitra miaraka amin’ny Loholona mba ahitana ny tetika rehetra entina ampandehanana indray ny lafiny ara-toekarena.
Amin’izao ady sarotra lalovan’ny firenena izao hoy izy dia ny tena tokony laharam-pahamehana dia ny fanjifana ny vokatra anatiny ho fitsimbinana ny tombotsoan’ny besinimaro. Nasiany resaka ihany koa ny mba hijeren’ny mpitondra fanjakana ireo tantsaha izay ao anatin’ny fiakaram-bokatra ankehitriny, ary koa ny mba hanampiana ireo indostria eto an-toerana.
mardi, 05 mai 2020 21:37
Ambovombe Androy: Napetraka androany ny vato fehizoro ny asa fanombohana ny tsena manarapenitra
Lanonana maro sosona no tontosa teto Ambovombe Androy androany 05 mey 2020. Tontosa androany ny fametrahana ny vato fehizoro ny asa fanombohana ny tsena manarapenitra eto Berary.
Nisy koa ny fametrahana vato fehizoro ny asa fanombohana ny lalana rarivato mirefy 2,5km eto an-tampotanana Ambovombe, ka ny ampahany voalohany dia mankany amin’ny tsena manarapenitra, ny faharoa miazo ny kianja manarapenitra, ary mankany amin’ny Toby Mahavelo ny ampahan-dalana fahatelo.
Nisy koa androany ny fanolorana fanampiana ho an’ireo olona nafindra avy eny Berary, toerana hanorenana tsena manarapenitra, ka notolorana fanitso, fantsika ary hazo hanamboarany trano ny olona voakasik’izany.
mardi, 05 mai 2020 21:06
05 mey: Andro iraisam-pirenena ho an'ny Mpampivelona
Natokana ho Andro iraisam-pirenena ho an'ny Mpampivelona ankalazaina isan-taona ny 05 mey. Anisan'ireo kitro ifaharan'ny fikarakarana ny fahasalaman'ny Reny sy ny Zaza Malagasy ny Mpampivelona ary avokavoka mampiaina ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka.
Efa 130 taona no nisy antokon-draharaha ny Mpampivelona, ary 55 taona nisiana ny Holafitra nasionaly ny Mpampivelona eto Madagasikara. Misy koa ny Fikambanana nasionaly ny Mpampivelona eto Madagasikara, izay efa 22 taona nisiana.
Rtoa Ravelonanosy no vehivavy Malagasy voalohany nahazo diplaoma Mpampivelona. Miisa 6 518 ankehitriny ny Mpampivelona mikambana ao amin’ny Holafitra eto Madagasikara.
mardi, 05 mai 2020 20:35
Antenimieram-pirenena: Hifidy izay ho solontenany ao amin’ny CENI
Nisokatra androany talata 05 mey ny fivoriana ara-potoana voalohany amin’ity taona 2020 ity. Fivoriana notanterahina teny amin’ny CCI Ivato noho ny fanajana ny hamehana ara-pahasalamana mba tsy hisiana fifampikasohana ary fanajana ny elanelana iray metatra amin’ny samy olona.
Haharitra 60 andro ny fivoriana izay mifantoka amin’ny fandaniana ny teti-bolam-panjakana hasiam-panovana, ao ihany koa ny volavolan-dalàna mahakasika ny «Agriculture biologique», ny fankatoavana ireo hitsivolana laharana faha 001-2020, ny fifidianana izay ho solon’ny toerana banga ao amin’ny Vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana (CENI), araka ny nambaran-dRazanamahasoa Christine tamin’ny lahateny nataony nandrindra ny lanonam-panokafana.
mardi, 05 mai 2020 20:03
Fampianarana ambony: Vinavinaina hanomboka amin'ny 8 jolay 2020 ny taom-pianarana vaovao
Amin'ny alalan'ny fampianarana ampitain-davitra sy fizarana « polycopie » ho an'ny mpianatra no hamitana ny fampianarana tsy mbola vita tamin'ny taom-pianarana 2018-2019. Tsy mbola misy ny fampianarana anaty efitrano fianarana.
Anisany tapaka ireo nandritra COPRIES (Conférence des Présidents et des recteurs d'institutions de l'Enseignement supérieur) tamin’ny visioconférence notanterahana ny 4 mey 2020, niarahan'ny Minisitry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiantifika tamin'ireo filohan'ny oniversitem-panjakana sy Tale jeneralin'ny IST (Institut Supérieur de Technologie). Fivoriana nandinihana ny toe-java-misy sy ny fiainan'ny oniversite rehetra ao anatin'izao fiatrehana ny fihibohana izao.
mardi, 05 mai 2020 19:55
Covid-19: Fito mianaka nalaina tamin’ny « ambulance » ary nahiboka ao amin’ny Hopitaly Atsimo-Antsirabe
Taitra ny olona teo Ambohimena, tanàna eo ampivoahana an’Antsirabe manaraka ny lalam-pirenena faha-7, androany talata 5 mey 2020 raha nahita « ambulance » sy fiara 4x4 anankiroa an’ny Polisy, tonga naka olona miisa fito, ary nitondra azy ireo avy hatrany nahiboka ao amin’ny Hopitaly Atsimo.
Fianakaviana iray mpiasa ao Ambatovy, vao tonga avy any Toamasina, nandeha kamiao, ny efa-mianaka amin’izy fito ireo, mpampiantrano nivantanan’izy ireo kosa ny telo mianaka.
Mandeha ny fanadihadiana hamantarna ireo olona efa nifanerasera tamin’izy ireo, nandritra ny fotoana nahatongavany tao Ambohimena. Efa hitan’ny olona nivezivezy ary nividy entana tamin’ny tsenakely manodidina ireto olona avy any Toamasina ireto.
Niampy olona 4, mpiray tanàna ireo nahiboka ao amin'ny Hopitaly Atsimo hatreto.
mardi, 05 mai 2020 18:32
Jafaro – Ambovombe: Voasambotry Zandary ireo jiolahy nanafika tamin’ny « coupe-coupe »
Lehilahy roa no naratra mafy teo amin’ny valanorano sy loha nofirain’ny jiolahy tamin’ny « coupe-coupe » sady nozerana vato tamin’ny loha ny 26 aprily 2020 lasa teo tao Antsakoambalo Kaominina Jafaro, Distrika Ambovombe.
Nanokatra fanadihadiana avy hatrany ny Zandary taorian’ny fampandrenesana nataon’ny Ben’ny tanànan’i Jafaro sy ny fanamarinana natao tao amin’ny toerana nitrangan’ny herisetra.
Efa-dahy no fantatra fa nahavanon-doza. Nalefa notsaboina ao amin’ny CHRR Tsihombe ireo naratra. Roso tamin’ny fikarohana ireo olon-dratsy ny Zandary. Voasambotry ny Zandary avy ao amin’ny Brigady Antanimora, Kaompania Ambovombe, omaly 4 mey 2020 avokoa izy efa-dahy. Anatin’ny famotorana ny raharaha ankehitriny.
mardi, 05 mai 2020 18:26
Antsohihy: Zandary iray nidoboka am-ponja voarohirohy amina vono olona
Zandary iray, kilasy faharoa, niasa tao amin’ny Brigady Anahidrano no nampidirina am-ponja vonjimaika ny 4 mey 2020. Voarohirohy amina raharaha vono olona izy, sady nitsoaka.
Nahatratra 84 ireo zandary nidoboka am-ponja nandritra ny taona, noho ny fandikan-dalàna sy heloka bevava vitany. Hatramin’ny fiandohan’ity taona 2020 ity, dia efa nisy 35 ireo zandary namoahana taratasy finenjehana. 18 notanana am-ponja vonjimaika, 8 nahazo fahafahana vonjimaika. Zandary 1 nafahana. Misy 3 ireo raharaha efa vita famotorana ka hatolotra ny Fitsarana, ary misy dosie 5 hafa andam-panaovana famotorana.
mardi, 05 mai 2020 18:19
BEPC 2020: Nanomboka ny famolavolana ny laza adina
Nanomboka ny alatsinainy 04 may 2020 ny famolavolana ny laza adina BEPC 2020 ho an'ny faritra manerana ny nosy. Mpampianatra avy amin'ny tsy miankina, ny mpampianatra avy amin'ny fanjakana, ary solontena avy amin'ireo DRENETP no mpandray anjara amin'izany.
mardi, 05 mai 2020 18:05
Antananarivo Renivohitra: Manao fisavana ny taratasy fahazoan-dalana hanorina
Misy ankehitriny fisavana ny taratasy fahazoan-dalana (autorisation de construire) ataon'ireo “Inspecteurs de voirie” avy ao amin'ny “Direction de l'Urbanisme” ny Kaominina Antananarivo Renivohitra.
Misahana ny fanaraha-maso ireo asa fananganana sy fanorenana eto Antananarivo Renivohitra ireo mpisava ireo miaraka amin’ny « Ordre de mission » voasonian'ny tompon'andrakitra eto anivon'ny fiadidiana ny Tanàna hoentin'izy ireo manatanteraka izany andraikiny izany, miampy ny "badge" ara-dalàna izay manamarina ny maha mpiasa azy ireo.
Atsahatra avy hatrany ny fanorenana tsy misy fazahoan-dalana, ary misy ny “avertissement” omena ny tompony miampy ny “Procès verbal de Constatation”, ary koa ny fiantsoana ny tompon'ny fanorenana mba hanantona ny biraon'ny Kaominina Antananarivo, Lapan'ny Tanàna Analakely ao anatin'ny 48 ora.